Regeringens udmeldinger om COVID-19, somalisk - Mino Danmark
Calaamadaha coronavirus waa in la baaro dadka uurka leh kahor dhalashada
Khamiista, Maarso 19keeda, Maamulka Caafimaadka ee Qaranka (Sundhedsstyrelsen) wuxuu soo saaray tilmaamo cusub oo ku saabsan sida loo caawini karo dumarka uurka leh ee xanuunsan iyo dhalmada, lammaanahooda iyo ilmaha dhasha ah.
Markay uur leh uu u sii socdo isbitaalka, waa in laga baaraa coronavirus.
Haddii baaritaanku muujiyo in haweeneyda uurka lihi ay cudurka qaadday, taxaddar gaar ah waa in la qaataa oo shaqaaluhu ay tahay inay xirtaan maaskaro iyo qalab kale. Qofta dumarka ah ee uurka lihi sidoo kale waa inay xirataa maaskaro.
Haddii cunugga looga shakisan yahay inuu qabo fayruska, waxaa lagu daaweynayaa iyada oo ku saleysan mabda ‘taxaddar ah sidii oo ay ku dhacday cudurka illaa ay ka hesho jawaabta baaritaanka.
lammaanaha/hu cudurka qaba ma soo geli karo dhalitaanka cunugga. Tani waxay sidoo kale quseysaa caabuq la tuhmayo.
Intaas waxaa sii dheer, lammaanaha cudurka qaba waa inuu ka fogaadaa cunugga illaa intay astaan ​​la’aan ahaato 2 maalmood.
Intaa waxaa sii dheer, isbitaallada qaar ka mid ah waxay hadda sheegeen in kaliya lammaanaha/hu ay joogi karaan dhalista qaraabo ahaan soo loo yareeyo yareeyaan qaadista cudurka.
In kasta oo hooyadu ay ku dhacday cudurka ‘covid-19’, haddana kama soocna ilmaha mooyaane haddii hooyadu ku jirto xaalad halis ah oo u baahan daaweyn.
Haddii hooyada la tijaabiyo si fiican laakiin uma baahna daaweyn, markaa talo ahaan ayaa ah inay sida ugu dhakhsaha badan ugusoo laabato isbitaalka. Waxaa la siin doonaa hagitaan ah sida isha loogu hayo caafimaadka ilmaha.
Hooyooyinka cudurka qaba waa inay sidoo kale naasnuujiyaan, laakiin waxa lagula talinayaa inay naaska ku dhaqaan biyo iyo saabuun ka hor naasnuujinta oo ay xirtaan maaskaro. Si tan loo sameeyo, dhaq gacmaha iyo alkoolna isticmaal.
Sawirrada ”scan” oo muhiim ah waa la sii wadayaa, oo ay ku jiraan laablaabyada qoorta iyo wixii la mid ah.
Waxaa la filayaa in diyaarinta dhalashada la kansali karo iyo in umulisadu taleefanka ku sii socoto. Si kastaba ha noqotee, booqashooyinka umulisooyinka iyo baarista ee muhiimka ah, sida caadiga ah ayaa loo qabanayaa, hooyada oo keliya, iyadoo la ilaalinayo fiditaanka cudurkan.
Cisbitaalada waxay gacanta ku hayaan dhalmada sida caadiga ah, waxayna ku nuuxnuuxsadeen in qofku uusan ka walwalayn in loo ogolaado inuu soo galo oo uu dhalo. Dabcan taas waa la heli.
Laga soo bilaabo Statens Serum Institut, Arbacada 18-ka Maarso.
U yeer dhammaan muwaadiniinta.
Statens Serum Institut waxay ku dhiiri gelinayaan dhammaan muwaadiniinta inay iska diiwaan geliyaan qiyaasaha hargabka (influmeter), dagaalka lagu taxadarayo Coronavirus.
Cilmiga qiyaasaha hargabka wuxuu ku saleysan yahay dadaalladaada iskaa-waxuqabsada maadamaad tahay muwadin, iyadoo aan la eegin inaad raadsatey daryeel caafimaad ama aad heshay daaweyn, waxaad usbuuc walba soo sheegaysaa inaad calaamadaha cudurkaan qabtid iyo in kale. Markaad sidaa sameysid, waxaad gacan ka geysaneysaa aqoonta ku saabsan faafinta bulshada.
Dhammaan dadka ku nool Danmark way ku biiri karaan qiyaasaha hargabka – carruurta, dhalinyarada, waayeelka, caafimaadka iyo bukaanka. Waad iska qori kartaa naftaada ama xubnaha qoyskaaga. Xitaa haddii adiga ama kuwa kale aad horey u bukoodeen ama aad u xanuunsateen. Kaqeybgalayaashu waxay wax ku darsadaan macluumaad isku mid ah oo waxtar leh, dhamaan bukaanka, kuwa jiranaa iyo kuwa jirani kara. Markaa ha ka baqan xitaa haddii aadan u malayn inaad jiran tahay ama aad hore u xanuunsanaysay
Waaxda la-dagaallanka ee cudurrada faafa, Statens Serum Institut, waxay kormeertaa kana hortagtaa cudurrada faafa ee Denmark, waxayna ka shaqeysaa qiyaasaha hargabka (influmeter), taasoo qayb ka ah kormeerka guud ee cudurrada la xiriira hargabka, hargabka iyo astaamaha COVID-19.
Tag qiyaasaha hargabka (influmeter): www.influmeter.dk
Danmark, sida adduunka intiisa kale, waxaa ku dhacay cudurka faafa ee coronavirus. Dowladaha dalal kala duwan waxay doorteen habab kala duwan, laakiin halkan waxaa ku yaal talooyinka ay habboon tahay inaad raacdid haddii aad ku nooshahay Danmark.
Waxa jira fikrado badan oo ku saabsan cudurka coronavirus ee Danmark iyo internetka. Xitaa dhakhaatiirta iyo khibradlayaasha kale waxay leeyihiin aragtiyo kaladuwan. Laakiin sababta oo ah qofna runtii ma yaqaan sida uu cudurku u xumaan karo, wicitaankeena ayaa ah inaad iska ilaaliso cudurka.
Talada halkan waxay ku saleysantahay suaalaha janaalka DRka la weydiiyey oo ku sugan borofisar iyo lataliye ka tirsan waaxda caafimaadka faafa ee Isbitaalka Hvidovre Thomas Benfield iyo talo ku saabsan akhlaaqda macquulka ah ee ka socota Maamulka Caafimaadka ee wadankan. Xaaladaha halka talobixinta masuuliyiinta caafimaadka loo fahmi karo dhowr siyaabood, waxaan doorannay hab taxaddar leh si aan u fahamno jawaabaha.
Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, waxaad wici kartaa khadka tooska ah ee gobolka taleefanka ah 7020 0233. Fadlan la soco in shaqaalaha khadka tooska ah aysan ku hadlin dhammaan luqadaha kala duwan – markaa la xiriir. Caawinaad eaxaad ka heli kartaa saaxiibbada ama ehelkaaga ku fiican af-deenishka ama Ingiriiska.
Ku saabsan waxa la sameeyo maalmahan:
S: Intee in leeg baa banaanada joogi kara, guriga ka baxsan?
A: Haa, intii suurtagal ah. Qof kasta oo ka shaqeeya xafiiska waa inuu joogaa guriga ilaa aad qabtid shaqo aad u muhiim ah – tusaale ahaan, waaxda caafimaadka ama booliska. Dhamaan loo shaqeeyayaasha waxaa weydiistey dowlada inay shaqaalahooda siiso shaqo guri. Waa mas’uuliyadda cidda aad u shaqayso in la qaban karo – laakiin ka caawi wax kasta oo aad kari karto.
S: Waqti intee le’eg ayaan ku qaadan karaa banaanka?
Jawaab: Sida ugu macquulsan meesha ay jiraan dad kale oo ag dhow. Aad bay u fiicantahay in beerta la joogo ama in la lugeeyo la tago. Laakiin ha fadhiisan maqaayadaha, kafateeriyada ama baararka.
S: Ma u marti qaadi karaa saaxiibaday cashada?
A: Digniintu maaha. Haddii midkiin uu leeyahay astaamo ay ka mid yihiin qufac, qandho, san duuf leh, ama astaamo kale oo caadi ah oo hargab ama ifilo, waa inay guriga iska joogaan.
S: Ilmahaygu ma inay joogaan guriga xannaanada / dugsiga / daryeelka ilmaha?
A: Haa. Iskuulada iyo xanaanooyinka ayaa xiran. Laakiin waa inaad ka doorbidaa carruurtaada guriga joogitaanka xannaanada gaarka ah ee carruurta kale. Tan waxa u sabab ah carruurtu waxay u faafiyaan infekshanku sidoo kale dadka waaweyn, laakiin aad ayey u yar yihiin xitaa halis ayey ku jiraan. Sidaa darteed, way adkaan kartaa in la arko haddii carruurtu cudurka qabto ama in kale.
S: Ma booqan karaa waalidkeyga (iga waaweyn)?
A: Dariiqa taxaddarku waaa in aad sameynin. Haddii ay si kale u bukaan ama ay murugsan yihiin, ha u tegin. Haddii labadiinaba adiga iyo aad caafimaad qabtiin oo aadan lahayn astaamo sida qufac, qandho, duuf, ama calaamado kale oo caadi ah oo hargab ama ifilo, dibadda kula kulan si aad u yareyso halista.
S: Maxaan sameeyaa haddii aan yeesho astaamo laakiin aan u baahanahay in aan wax u iiboayo waalidkay?
A: Markaa alaabtooda u dhig banaanka ama hoolka. Dabcan, waalidiintaadu waa inay gacmahooda si fiican u dhaqaan haddii ay taabtaan wax aad taabatay. Fayrasyada waxay ku noolaan karaan ilaa 3 maalmood sagxadaha aad taabatay.
S: Waalidiinteyda (kuwa weyn) miyay xannaaneeyaan carruurtayda yar?
A: Digniintu maaha koley. Haddii labadiinaba adiga, carruurtaada, ama waalidiintaada ay astaamo leeyihiin, talobixinta taxaddarku waa in gebi ahaanba laga fogaado. Caruurtu aad bay u bukoodaan, way bukoodaan iyagoonan arkin, dadka da’da ahina waxay ugu jiraan halista ugu weyn haddii ay qaadaan. Waxaa fiican in la sugo oo la sugo xaqiiqda ah in ayeeyada iyo ciyaalka ay ay ayeeda (abooto) iyo awowga u yihiin ay si amaan ah ugu midoobi karaan.
S: Wax ma ka soo gadan karaa dukaanka weyn iyo dukaannada kale?
A: Haa, laakiin: Samee sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah, u taabso sida ugu yar ee suurtogalka ah, gaar ahaan markii aysan dad badan oo kale bakhaarka ku jirin, oo xusuusnow inaad gacmaha in aad nadiifiso markaad ka tagto dukaanka – oo aad dhaqdo , markii aad guriga aado.
S: Miyay tahay inaan aado maqaaxi, adiga iyo asxaabtaadaoama kaliya inaan fadhiisto oo aan shaqeeyo?
A: Maya. Way fiicantahay inaad ka joogtid taas sidey dowlado sheegtay. Ma ogaan kartid cidda meeshaas joogtay maalmahan kafateeriyada gebi ahaanba nadiifin karin.
S: Ma la kulmi karaa saaxiibbaday dibadda?
A: Haa, taasi waa waxa ay mas’uuliyiintu hadda dhahayaan. Laakiin ka fogow sidii caadiga ahayd oo ha ku salaamin dhunkasho ama gacanta ha dhiibin. Dabcan, iska ilaali inaad la kulanto qof haddii adiga ama iyagu aad leedahay astaamo. Xusuusnow inaad gacmahaaga nadiifisid oo aad maydho markii aad guriga aado.
S: Miyaan qaadi karaa tareemada iyo basaska dadweynaha?
A: Maya hadii aad leedahay astaamo sida qufac ama qandho. Xitaa haddii aadan lahayn astaamo, talobixin taxaddar leh waa inaad ka fogaato halahaas.
Ku saabsan cudurka:
S: Roomaatadada ma ka geysan karaa kahortagga cudurka? Kawaran saabuun gacmeedka caadiga ah?
A: Labada qayboodba way caawinayaan. Waxa ugu fiican waa maydhasho dhammaystiran – way ka fiican tahay roomaatada. Si fiican gacmahaaga u dhaq gacmahaaga marar badan maalintii, iyo gaar ahaan markaad taabato wax ama qof.
S: Ma runbaa inay ku fiican tahay xuska xusulka?
A: Haa. Waa inaad afkaaga wax ku haysaa markaad qufacdo ama hindhisto, xitaa haddii aadan u maleynin inaad cudurka qabtid. Haddii aad iska ilaaliso inaad gacmahaaga u isticmaasho taas, khatarta ah inaad ku qaaddo dadka kale sidoo kale way ka sii yar tahay.
S: Caruurtaydu khatar ma ku jiraan?
Jawaab: Qof walbaa khatar ayuu ku suganyahay, laakiin waxaa jiray kiisas aad u yar oo aan aad uga hadalnay carruurta adduunka oo dhan. Nasiib wanaagse, carruurtu runti way ku fiicnaadaan cudurradan oo
Somalisk kale, laakiin dadka waaweyni aad ayey u bukoon karaan dadka da’da ahna waxay halis ugu jiraan inay u dhintaan.
S: Ma laga baaraa tijaabada coronavirus?
A: Haddii aad caafimaad qabtid in aad guriga joogtid, markaa maya. Qiimeyntan waxaa loo sameeyaa iyadoo la waco dhakhtarkaaga (maahan isbitaalka) calaamadaha sida qandho, qufac ama hargab. Haddii dhakhtarkaagu u maleeyo inaad u baahan tahay in lagu arko isbitaal, waxaad caadiyan iska baari doontaa coronavirus.
S: Muddo intee la’eg ayay qaadataa in la qaadsiiyo illaa astaamaha lagu garto?
A: Waxbadan ayey ku kala duwanaan karaan. Laakiin waxay qaadan kartaa 10 ilaa 12 maalmood halkaad labadiinuba cudurka ka qaadsiin kartaan oo aad ku qaadsiin kartaan kuwa kale – adigoon ogayn.
S: Muddo intee leeg ayaad ku xanuunsanaysaa cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’?
A: Waxay kuxirantahay sida ay u daran tahay. Dadka badankood way xanuunsan yihiin 3-7 maalmood. Laakiin qof ahaan, waxay ku qaadan kartaa dhowr toddobaad. Waa muhiim in la go’doomiyo inta lagu jiro waqtiga aad jiran tahay oo dhan.
S: May caawini kartaa in laga talaaleysanyahay cudurka influenza? Jawaab: Ma garanayno, laakiin ma aaminsanin. Laakiin waxay kaa caawinaysaa inaadan laba jeer qaadin ama laba jeer kugu dhicin. Iyada oo ku saleysan aqoonteenna hadda jirta, waxaan rajeyneynaa inaan mar dambe cudurka qaadsiin markii astaamahaagu ay ka maqnaadeen wax ka badan 48 saacadood.